ကောင်းမှုတော် ဘုရားကြီး ဘာဖြစ်လို့ ရွှေဆေးသုတ်သလဲ အဖြေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » ကောင်းမှုတော် ဘုရားကြီး ဘာဖြစ်လို့ ရွှေဆေးသုတ်သလဲ အဖြေ
ကောင်းမှုတော် ဘုရားကြီး ဘာဖြစ်လို့ ရွှေဆေးသုတ်သလဲ အဖြေ
Posted by လင်းဝေ on Mar 22, 2012 in Business & Economics, Money & Finance | 25 comments
ဒီဆိုက်ပေါ်မှာလည်း မန္တလေးက မစ္စတာပေါက် ရဲ့ ကင်မရာနှိပ်ချက်များနဲ့ တက်လာဖူးတဲ့ ပုံတွေရှိပါတယ်။
ကောင်းမှုတော် ဘုရားကြီး ရွှေရောင်ဝင်းပပ နဲ့ သပ္ပါယ်နေပုံများ။
ဒီကောင်းမှုတော် ဘုရားကြီး ကို ရွှေဆေးသင်္ကန်း ကပ်လှူမယ် ဆိုတဲ့ ထုတ်ပြန်ချက် ထွက်လာတော့ အမြင်တွေအမျိုးမျိုးပေးကြတာလည်းမှတ်မိကြပါဦးမယ်ထင်ရဲ့။
အဖြူရောင်ထုံးသင်္ကန်းနဲ့သာ တင့်တယ်ပါတယ် ဆိုတာမျိုး။ ရှေးက ပုံစံအတိုင်း သူ့မူသူ့ဟန်နဲ့ ရှိနေတဲ့ ကောင်းမှုတော် စေတီကြီးကို ရွှေရောင် သဘောင်္ဆေးတွေသုတ်တာ မသင့်တော်ပါဘူး ဆိုတာတို့ပေါ့။
ကိုယ် ကိုယ်တိုင်လည်း အင်း ….. မူလ ထုံးသင်္ကန်းအဖြူရောင်နဲ့ ဗိသုကာပုံထူးခြားတဲ့ ကောင်းမှုတော်ဘုရားကြီးကို မူလအတိုင်း မူလပုံရိပ်အတိုင်းသာ ကြည်ညိုဖွယ်လို့ တွေးထင်မိပါတယ်။
အဲဒီကိစ္စကို မြစ်ဆုံလို မကန့်ကွက်ကြပေမယ့် အသံလေးတွေတော့ ထွက်လာခဲ့ကြသေးတာပါပဲလေ။
ဘုရားဂေါပက ကိုလည်း နားမလည်နိုင်ဖြစ်မိပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့များ ဒီလို လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်သလဲပေါ့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ သိတော့ သိချင်ခဲ့ပါတယ်။
စိမ်းလဲ့ကန်သာလမ်းက ငါးလောင်းပြိုင်လူသတ်မှုကတော့ အခုထိ မပေါ်သေးဘူးနော်။
မကြာခင်ပေါ်မှာပါလို့ ဖြီဖြန်းဖိန့်ဖိဖုံး ခဲ့တဲ့သူကတော့ ဝန်ကြီးနေရာ ပေးသနားခံရလို့ အခုတော့ ဝန်ကြီးပေါ့ဗျာ။ (စွမ်းဇာနည်တို့ ဇာတ်မှာ လည်း ဝန်ကြီးနေရာ တွေလိုနေပါတယ်တဲ့ )
အဲဒီအမှုတော့ အခုထိ လက်သည်မပေါ်သေးပါဘူး။
သို့သော်…. ကောင်းမှုတော်ဘုရားကြီး ဘာကြောင့်ရွှေဆေး ကပ်လှူတာလည်း ဆိုတဲ့ နောက်ကွယ်က အကြောင်းအရာကြီးတော့ ဒီမနက်ပဲ မတော်တဆ တွေ့ရှိသွားပါသဗျား။
(တွေ့တွေ့ချင်း မနေနိုင်လို့ ရေးမယ် စဉ်းစားထားတဲ့ အခြားအကြောင်းအရာတွေထက် လုပ်လက်စ အလုပ်တွေရပ်ပြီး အရင်ဆုံးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ တော်တော်တော့ မကောင်းဘူးဗျ။ အလှူလုပ်ရင် ကြည့်သာလှူကြပေတော့ဗျာ။ )
မနက်က အလုပ်ကိစ္စတစ်ခုနဲ့ လူတစ်ယောက်ကို အီးမေးလ် ပို့ထားတာရလား ဖုန်းဆက်တော့ သူခရီးသွားနေတာ။ မုံရွာဘက်သွားနေတယ်။ မုံရွာရောက်ရင် ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်တဲ့။ အခု စစ်ကိုင်း ကောင်းမှုတော် ဘုရားရှေ့မှာ ကားဖြတ်သွားနေတယ်ဆိုလာတယ်။ အဲဒီ ဆရာက မြန်မာပြည်က အချို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ နဲ့ ကိစ္စတော်တော်များကို သေချာစွာ နှံ့စပ်လေသူဖြစ်တဲ့အပြင် ဓါတုဗေဒ ပစ္စည်းများ နဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်း ဈေးကွက်လောကကိုလည်း ကျွမ်းကျင်သူဆိုတော့ ရုတ်တရက် စပ်ဆက်ပြီး မေးမိပါတယ်။ ကောင်းမှုတော် ဘုရားကြီး ရွှေဆေး သုတ်တာ ဘယ်သုတ်ဆေးကုမ္ပဏီက ဆေးတွေ ပစ္စည်းတွေရောင်းလိုက်ရသလဲဆိုတော့ “ နိုင်ငံတော်ပေါ့ဗျာ ” ဆိုပြီး ဖြေပါတယ်။ ပြီးတော့ ခင်ဗျားက ဘာဖြစ်လို့ စိတ်ဝင်စားတာတုန်း လို့ ပြန်မေးသေးသဗျ။ ခင်ဗျားတို့ ကျုပ်တို့ စီးပွားရေးနဲ့ မပတ်သက်တဲ့ ကိစ္စပါဗျာ အေးအေးနေစမ်းပါလို့လည်း ပြန်ပြောပါသေးတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဘာရယ်မဟုတ်သိချင်နေလို့ပါလို့ သာဖြေမိပါတယ်။
“ နိုင်ငံတော်ပေါ့ဗျာ ” ဆိုတာ ဘာလည်း သိကြသလား။
နိုင်ငံတော် ဆိုတာ က ရှစ်လုံးကြီး ရဲ့ သား နဲ့ တပည့်အပေါင်းအပါများ မှာ သဘောင်္ဆေးစက်ရုံတစ်ရုံရှိပါတယ်။ Rising Sun သဘောင်္ဆေးစက်ရုံဆိုတာ သူတို့ပါပဲ။
အပြင်မှာတော့ မကြားဘူးသဘောက်ပဲဗျ။ ကိုယ်လည်း မတော်တဆ သိသွားတာပါ။ ပွဲတစ်ခုမှာ ဆုံမိပြီး သိသွားတာပါ။
နိုင်ငံတော် စီမံကိန်းများ အားလုံး အဲဒီ တံဆိပ်သာ သုံးပါတယ် ဆိုပဲ။
ကဲ … ရွှေဆေးသင်္ကန်း ကပ်လှူတဲ့ စားရိတ်စုစုပေါင်း ဘယ်လောက်လဲ ဆိုတာ ဂျာနယ်အဟောင်းတွေ ပြန်လှန်ရင် တွေ့မိမှာပဲနော်။
သူ့ဘာသာသူ ထုံးဖြူသင်္ကန်းနဲ့ သပ္ပါယ်နေတဲ့ ထူးခြားတဲ့ဟန်နဲ့ ဘုရားကြီးကို ရွှေဆေးသုတ် လို့ လမ်းညွှန်ချက်ပေးနိုင်တာ ဘယ်အဆင့်လောက်ဖြစ်မလဲဗျာ။
သုတ်တဲ့အခါမှာလည်း ရွှေဆေးပေါင်းများစွာသုံးရမယ် ဆိုတာ။ နေပြည်တော်က ဘုရားအသစ်ကြီးကို လက်စွမ်းပြပြီးနောက် ရပ်တန့်လို့မရနိုင်တော့တဲ့ လက်စများကလည်း ပါလာပြီးနောက်။
စီးပွားရေး လုပ်ကြတာ ကောင်းပါတယ်။ တိုင်းပြည်ရဲ့ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတွေထဲမယ် ရင်းနှီးမြုပ်နှံကြတယ်ဆိုတာ ပိုတောင်ကောင်းသေးတယ်။
သို့သော် …… အလှူရှင်များ စေတနာသဒ္ဓါတရားဖြင့် လှူဒါန်းထားသူများရဲ့ ပိုက်ဆံကို ကိုယ့်အိတ်ထဲရောက်အောင် ဖိအားပေးပြီး လုပ်ကြတာကတော့ မကောင်းဘူးထင်တယ်ဗျ။
အလှူရှင်တွေ ကြည့်သာ လှူကြပေါ့။
ဘုရားက ရွှေခွာရင် ဘာဖြစ်တတ်တယ် ပြောတယ်။ ဘုရားကို ရွှေသုတ်ပေးတာ က ကုသိုလ်ရတာပေါ့နော။ အခုလို သုတ်ပေးတာကော ကုသိုလ်ရသလား။
ရွှေပြောင်ပြောင် တော်ပေါ်ကဘုရား မေနဲ့မောင်သစ္စာထား ပေါင်းရပါစေသား ဆုတောင်းမယ် …..
ဘုရားကိုသူတို့ဘာသာ ပြုပြင်ချင်သလိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပါ ကိုယ်ကတော့ ငရဲကြီးမှာစိုးလို့မဝေဖန်ချင်ဘူး … ရွှေတိဂုံဘုရားမှာ ရွှေသင်္ကန်းတွေကပ်လှူပါတယ် ကပ်လှူတိုင်းလည်းအလှူရှင်တွေကအလုအယက်လှူကြ ပါတယ် … ဘုရားက ခွာလိုက်တဲ့ရွှေတွေဘယ်ရောက်ကုန်လဲသိချင်ပါတယ်ချင့် …. အမေကတော့ပြောတယ် ရွှေfood ချိန်းဘယ်တော့မှ လုပ်မ၀တ်နဲ့တဲ့ ….
food chain ဆိုရင် မျက်စိထဲ …မက်ဒေါ်နယ်တွေ
ယိုရှိနိုယ တွေပဲ ပြေးပြေးမြင်နေလို့ပါ..
ရွှေခြေကျင်းက လုပ်ဝတ်လို့ ရပါတယ်ဗျ ….
ရှေးကလည်း ဂလိုပဲ လုပ်ဝတ်လာကြတာပဲဟာ…
အယူမသီးပါနဲ့ ကွယ်…တချဲဇီ ပါ…
ရှေးလက်ရာ ထုံးသင်္ကန်း ပုထိုးတော်ကြီးကတော့
ဒစ္စကို ပုထိုးတော်ကြီးဖြစ်ပြီး ၀င်းဟင်းဟင်း နေတာပဲ….
၀င်း-၀င်း ပေါ့ဂျာ …အာဟိ….
ခိုင်ခိုင် ကို နိဂိမိ မှ နီသွားပါတယ် ။
“…..ဘုရားကိုသူတို့ဘာသာ ပြုပြင်ချင်သလိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပါ ကိုယ်ကတော့ ငရဲကြီးမှာစိုးလို့မဝေဖန်ချင်ဘူး ……”
ကောင်းမှုတော် ဘုရားကို ထုံးဖြူဖြူ နဲ့ ဖူးရတာ ရင်ထဲ ငြိမ်းချမ်းပြီး အေးတယ်။
ရွှေအဆင်း နဲ့ ၀င်းဝါတာ လဲ ဿပါယ် ပါတယ်။
ရွှေတိဂုံ ဘုရား မှာ လဲ ခပ်ဆင်ဆင် ရှိခဲ့ ဖူးတယ်လေ။
အလူမီနီယံ လုပ်ငန်းရှင် ဂေါပက လုပ်တော့ ဘုရား ကုန်းတော် တခု လုံး အလူမီနီယံ၊ ဟော နောက် စတီး လုပ်ငန်း သမား လဲ ဖြစ်ရော အကုန် စတီး ဖြစ်သွားပြန်ရော။
နေအိမ်အဆောက်အဦ ပြင်ဆင်ရာမှာ အလူမီနီယံ ကနေ စတီး ခေတ်စားနေချိန် နဲ့ တိုက်ဆိုင် နေတာ့ အမှတ်တမဲ့ လူ တွေ ဘယ်သတိထားမိပါ့ မလဲ။
သူကြီးမင်းက ခြောက်ပေါင်တူလက်စွဲပဲနော့ ..။
ဒီတခါ သင်္ကြန်မှာ သိကြားမင်းမအားလို့ သူကြီးမင်းကိုယ်စားဆင်းရင်
လက်တဘက်က ပန်းပဲတူ လက်တဘက်က ကိုရီးယားကားထဲကဒိုင်းကြီးကိုင်ပြီး
(စိတ်မဆိုးနဲ့နော်… ပျော်လို့နောက်တာ… တနေ့နေ့ ပိုစ့်တွေနဲနဲကျဲတဲ့အခါ အဲဒီအကြောင်း အတည်ပြောကြရအောင်..)
နကိုက.. သခင်ဘသောင်း၊ ဆရာဇော်ဂျီ၊ တို့လောက်ပဲမှတ်နေတာ..
အခု.. ရွာသူမမ,ကောင်းမှုနဲ့.. ဦးသန့်ပါရထားတယ်..။
အော် သဂျီးရယ် ဒီလိုမှပြောပါ့မလားလို့… စိတ်ပူလိုက်ရတာ
ကောင်းမှု့တော်ဂေါပကတွေကလဲ လုပ်ချင်ဟန်မတူဘူး။ ကောင်းမှု့တော်ကိုရောက်တုန်းက ဘယ်လိုဖြစ်လို့ ဘယ်သူကများ ရွှေသင်္ကန်းကပ်တာတုန်းလို့မေးကြည့်တော့ အလွန်တရာစိတ်ပျက်သောအသံနဲ့ ဘယ်သူရှိရ မတုန်း တပ်ချုပ်ကြီးပေါ့ဗျာ တဲ့။ ဒီအတိုင်းဆိုရင် သူတို့တွေပေါင်းကြံတာဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒို့တပ်ချုပ်ကြီး က ကော်မရှင် ရလားမသိ။
ဒါ ………………….ကြောင့် ……………………………………ကိုး ။
သင်္ဘောဆေးစက်ရုံရဲ့ ပုံတွေနှင့်တစ်ကွ ခပ်အနုစိတ်စိတ်လေး
ချယ်မှုံးပြီး ပြည်သူတွေသိရအောင် ဖြန့်ဝေသင့်ပါကြောင်း
( တစ်ခါတစ်လေကြတော့လည်း ကိုယ်ယုံကြည်ရာ ဘာသာရေးရှု့ဒေါင့်ထဲက
သဒ္ဓါ တရားနဲ့ ကြည်ညိုပေမယ့် ဒီလိုလုပ်ရပ်တွေအတွက်တော့ လုံးဝကျေမနပ်နိုင်ဘူး
ဒါ့ကြောင့် ခိုင်လုံတဲ့ အချက်လက်တွေရှာပြီး ကျုပ်တို့ တောသားတွေသိအောင်
You shot the key point.
So.. Where is that factory ” Rising Sun “???
How about their product ( Quality, Prices ),
Which projects they got the contract to paint? and most important—
How much they paid for the TAX????
We should to find out for the truth.Correct??
Dear Brother, Ko Linn Wai,
We lost one of our cultural/ hostorical heritages.
ဒါမျိုးတွေက ကြာလှပါပကော ကိုလင်းဝေကျော်ရေ..။
ဒီတခုကတော့ မြင်းအစာကို ဆင်သွားစားတာပါ။
နှမြောစရာလို့ ပြောပြန်ရင်လဲ ငရဲတံခါးကြီးဖွင့်ဖွင့်ပြကြတယ်..။
ဦးဦးပါလေရာ ကို နိဂိမိ က စိမ်းသွားပါတယ်။
“………နှမြောစရာလို့ ပြောပြန်ရင်လဲ ငရဲတံခါးကြီးဖွင့်ဖွင့်ပြကြတယ်..။………”
တိုတိုနီဂီမိကို မီးမီးချာတူးဂ ပြာတွားပါဒယ်
တိုတိုင်ဝင်မကြောဘဲ ဘာရို့လိုက်ကလိနေဒါရဲ တိဂျင်ရို့ဘာ
သဂျီးမင်း အပီအပြင်ဟဲမယ်လို့ထင်ထားတာ တော်တော်လေးကီးလျှော့သွားတာတွေ့ ရပါတယ်
မယ်မယ်ပုကတော့ တုံးစံအတိုင်း ပရု တောင်းနေပါပီ ဦးလင်းမြွေဂျော်ဂ ကျိုးချားချာပေးမယ်ထင်ပါတယ်
တကယ်တော့.. အဲဒီရွှေရောင်ဆေးသုတ်မဲ့အစား.. အဲဒီငွေကို.. ဒီလိုထူးဆန်းတဲ့ ရှေးဟောင်းပုထိုးစေတီကြီးပါလို့.. ယူအက်စ်နဲ့ ဥရောပ တီဗီမှာ ကြော်ငြာ စက္ကန့် ၂၀ ၃ရက်လောက် ကြော်ငြာဖို့သုံးပြီး.. ထိုးပြလိုက်ရင်.. နိုင်ငံခြားသား တိုးရစ် တနှစ် ၅သောင်းလောက် ပိုရသွားနိုင်တယ်..။
မြန်မာပြည်ထဲ..တယောက် ၂ထောင်သုံးတယ်ထား.. တနှစ်ဝင်ငွေ.. ဒေါ်လာ သန်း၁၀၀ ပိုရတာပေါ့..
မြန်မာတွေ.. အလုပ်အကိုင် သန်းဂဏန်းထွက်လာမှာ…
လုပ်ပြီ။ မသိလို့မဟုတ်ဘူးဗျလို့ ပြန်ပြောမှာပေါ့၊ မောင်ရင်တို့က ပိတ်ဆို့ထားတယ်လေ အကြောင်းပြကောင်းသွားဦးမယ်။
တကယ်တော့ တိုးရစ်တွေလာတော့ ငါတို့ရမှာမှ မဟုတ်တာလို့ တွေးတာကိုး။
သူတို့မှာလည်း ရွာကထွက်လာတာ ဒီမျိုးဆက်မှလေ၊ အတွေးတိမ်တာလည်း မပြောလေနဲ့။
ဘယ်သို့ ဘယ်ပုံ ချမ်းသာကြောင်း သိရပါ၏
ရွှေခွာရင် အကုသိုလ် ဖြစ်မှာစိုးလို့လေ…..
၀ိနည်းတတ် ကြက်သတ်လို့ ရတယ် ဆိုထားတယ် မဟုတ်လား…
သူဘဲ တိမ် သူဘဲ နန်းမြုိ့ရိုး …………..
သူတို့ဘဲပြောတော့ ရွှေ ဆို ရွှေမြန်မာဆို…………
အဲတာကြောင့်တူများက အဖြူကို အနက်မဆိုးဘဲ ရွှေဆိုးလိုက်တာလေ
…………….သူကြီုးဆိုး အကြောင်းမပြန်ရင် ဒါဖြတ်စာလို့သဘောထားလိုက်တော့
အဖြူနဲ့ရွှေ ပြန်တွဲတင်ပေးလိုက်မယ်နော နက်ဖြန့်ကျရင်…………….
စိတ်ထဲ တနုံနုံဖြစ်နေတာ ခုမှပဲ လက်သည်ပေါ်တော့တယ်။ မိုးကောင်းတုန်းရွာထားကြအုန်းပေါ့လေ။
အပြစ်မပြောပါနဲ့ဗျာ သူတို့က အပြောင်းအလဲ လုပ်တာ fashion ဖြစ်နေလို့ပါ
သူတို့ကိုယ်သူတို့ တောင် ပြောင်းထားတယ်လေ။ နောက်ထပ်ပြောင်းအုံးမတဲ့။
ဒီတစ်ခါတော့ (သူတို့ကိုယ်သူတို့) အမြီးတပ်အုံး မတဲ့။ လမ်းဘေးက ခွေးတွေ
ကိုပေါက်တင်ပေးတဲ့ ပုံတွေကြည့်ရကတည်းက ပဟေဠိဖြစ်နေတာ ခုမှပဲရှင်းတော့တယ်။
ကိုလင်းမြွေကောင်းမှုနဲ့ အဖြေသိလိုက်ရတော့ နှစ်ပေါင်းများစွာ အဖြူရောင်နဲ့ သပ္ပါယ်ခဲ့တာ ပိုကောင်းပါတယ်တောင် မပြောရဲတော့ပါဘူး၊
Now they read your idea and preparing the proposal to paint back in White Colour.???? ( Just Kidding or…. )
Ma Ma Padonma,
You can see easily what we could not see.
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းက တရုတ်ကြီးလုပ်တာကိုးဗျ။ ကောင်းမှုတော် ပုထိုးတော်ကြီးကြတော့ တက်ရှုပ်ကျီးနဲ့ရှစ်လုံးလဗျာ…။ တူဝူး….။